တိုးမြှင့်မှုအတွက်တောင်းဆိုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းအပြီးတွင်၊ လစာတိုးတက်မှုသို့ဘာသာပြန်ထားသောအကျိုးကို။ တစ်ခါတစ်ရံလစာတိုးခြင်းသည်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်သောလူ့အရင်းအမြစ်ကိုသတိပြုမိသည်။
သို့သော်များသောအားဖြင့်ဤကိစ္စသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ထိမိသောအခါပါပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စေပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြှင့်တင်ပေးပါ.
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် အေးမြသော ဦး ခေါင်းနှင့်အတူ။ သင်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲပြီးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာရမည်။
တစ် ဦး မြှင့်တင်ရေးတောင်းဘို့အချို့သောလမ်းညွှန်ချက်များ
ကုမ္ပဏီရှိလူတိုင်းသုံးနိုင်သည်။ ဒါကလုံးဝရှင်းရမယ်။ ယခုတွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လစာတိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းဆိုနေသော ၀ န်ထမ်းမှပေးအပ်သောကတိကဝတ်၊ အပ်နှံမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး တွင်ရှာတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိထားရမည်။
ကုမ္ပဏီအတွက်အောင်မြင်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း Be ။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များသည်များစွာသောအရာများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ထူးချွန်သောအောင်မြင်မှုများရှိပါကရည်မှန်းချက်များအားလုံးပြည့်စုံပါက၊ သာမန်ထက် ကျော်လွန်၍ ထည့်ဝင်မှုများရှိပါကစာရင်းပြုစုပြီးအငြင်းပွားမှုအဖြစ်ပြသခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ကောင်းသောအရာတို့ကိုသတိပြုရပေမည်.
စျေးကွက်လေ့လာဖို့လိုတယ်။ အလုပ်သမားတိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်ယူမှတ်ပြီးမိမိအလုပ်ရှင်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်ရှုမြင်ရမည်။ အကယ်၍ လစာနှင့်လုပ်ခသည်စျေးကွက်အခြေအနေအောက်တွင်ရှိနေပါကတိုးတက်ရန်တောင်းဆိုရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
"ငါကမ်းလှမ်းမှုရှိတယ် ... " ဒါဟာအသုံးအများဆုံး "နည်းစနစ်" တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါကကမ်းလှမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အရာနှစ်ခုအနက်တစ်ခုမှာလစာတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခြင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်အရေးကြီးဆုံးမှာရင့်ကျက်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိသူတစ် ဦး ၏ထင်မြင်ချက်ကိုသင်ပေးရမည်။ မြှင့်တင်ရေးတောင်းဆိုမှုကိုစိတ်ကူးတစ်ခုမျှသာအဖြစ်မရှုမြင်သင့်ပါ။ ၎င်းသည်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ မက်လုံးပေးခြင်းလည်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုဘယ်သောအခါမျှшантажမပြပါနှင့်။
ဓာတ်ပုံရင်းမြစ်များ - Ignacio Santiago / Youth လူငယ်တိုင်းပြည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ယဉျကြေးမှု » တစ်ဦးလစာတိုးတောင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Lemaire နွေ ဦး / နွေရာသီ 2018: sartorial minimalism